မည်သို့ရန်ခရီးသွားလုံခြုံစွာ coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > မည်သို့ရန်ခရီးသွားလုံခြုံစွာ coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း
အဆိုပါ coronavirus ဖြစ်ပွားကမ္ဘာတဝှမ်းကလူများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ကြီးမားအကြောင်းမရှိခဲ့, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းအကြီးမြတ်ဆုံးကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးခရီးသွားများအတွက်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း. ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြပြီးလက်မှတ်တွေကိုမကြာခဏပြီးသားကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကြောင့်,, သငျသညျအစားပယ်ဖျက်သင့်ရဲ့အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ရန်အဘို့အပိုအဓိပ္ပာယ်စေ. သငျသညျအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်, ဤအကြံပြုချက်များ၏အားသာချက်ယူ သေချာသင် coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာအပေါင်းတို့နှင့်အတူရစေ Corona နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များ.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသည် Eco-Friendly and လုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းရန်ခရီးသွား. thဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
ပဌမ, အတိအကျ coronavirus ဘာလဲ? ဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းအသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါကဲ့သို့သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါပါဝင်သည်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏မျိုးင် (MERS) နှင့်ပြင်းထန်သောထူးခြားသောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ (SARS). ဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့ဝတ္ထု coronavirus ခေါ်ဆိုရမှာပါ COVID-19 သည်နှင့်တရုတ်ပြည်မကြီး၏ဟူဘေးပြည်နယ်တွင်ရှိကြတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်, ဝူဟန်မြို့၌. ဒါဟာအအေးကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူမြင့်မားစွာကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပါသည်, အဖျားအပါအဝင်, လည်ချောင်းနာသည်, ခြောငျးဆိုး, ကာနှာရည်ယို. ဒါဟာပထမဦးဆုံးဇန်နဝါရီလအသိအမှတ်ပြုမှုဆီသို့ရောက် လာ. , ကတည်းက, ရောဂါအာရှအများကြီးအနှံ့ပြန့်နှံ့နှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန်ခဲ့ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောဂျပန်အဖြစ်ထိခိုက်နိုင်ငံများ, တောင်ကိုရီးယား, အီတလီ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်, နှင့်အီရန်. ဤသည်အများအပြားနေရာများတွင်ခရီးသွားကန့်သတ်ထားသို့မဟုတ်ခရီးသွားအကြံပေးချက်များအတွက်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်, အများကြီးပိုပြီးနေဆဲခရီးသွားများအတွက်အလားအလာရှိပါတယ်သော်လည်း.
မည်သို့ရန်ခရီးသွားလုံခြုံစွာ coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း?
While the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) အများဆုံးအလွန်အမင်းထိခိုက်သူတွေကိုနိုင်ငံများသို့ nonessential ခရီးသွားဆန့်ကျင်သတိပေးလိုက်သည်, ကမ္ဘာ၏အများကြီးကန့်သတ်မြင်နေဖြစ်ပါတယ်, မည်သည့်ကိစ္စများတွင်ပါလျှင်. အဆိုပါ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ COVID-19 နိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှုထက်တစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါ၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ယူဆထားပါတယ်, အရာနည်းလမ်းကိုသင်နေတာသတိထားလျှင်သင်သူတို့အားခရီးသွားအစီအစဉ်များနှင့်အတူပေါ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်. ရုံဤအကြံပြုချက်များကို အသုံးပြု. သင်၏ကျန်းမာရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အပိုဂရုစိုက်:
အဖျား 1: အားလုံးသင့်ကာကွယ်ဆေး Get
ဒီသိသာထင်ရစေခြင်းငှါနေစဉ်, သင်သည်သင်၏ခရီးသွားစတင်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌သင်၏အကာကွယ်ဆေးရရှိပါသည်ကြောင်းသေချာစေရန်အရေးကြီးသောရဲ့. သငျသညျကိုသှားမတိုင်မီသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ရိုက်ချက်များထွက်ရှာနိုင်ရန်အတွက်, ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များအတွက် CDC ရဲ့ website ကိုစစ်ဆေး. သေချာသင်တတ်နိုင်သမျှအများအပြားကာကွယ်နိုင်သောရောဂါအဖြစ်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ Making ခိုင်မာတဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်.
အဖျား 2: ပိုးသတ်ဆေး Wipe ကိုယူခဲ့
အဆိုးဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အချို့နီးစပ်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့တည်နေရာတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြ, ထိုကဲ့သို့သောဂျပန်အတွက် Quarantine စိန်မင်းသမီးခရုဇ်သင်္ဘောအဖြစ်, ရုံအပြင်ဘက်တိုကျို၏ကျောက်ချရပ်နားရာဖြစ်နေဆဲ. သင်သည်လည်းများစွာသောအခြားခရီးသည်များအကြားခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, ထိုကဲ့သို့သောလေယာဉ်ပေါ်အဖြစ်, သန့်ရှင်းသောသင့်ရဲ့ဧရိယာကိုစောင့်ရှောက်ရန်သေချာစေပါ. ကိုယူခဲ့ခြင်းနှင့် antibacterial Wipe နှငျ့သငျရောက်လာသောအခါသင့်ရဲ့ဧရိယာကိုရှင်းလင်း. ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာရှင်းလင်းပါဝင်သည်, cupholders, ဗန်းစားပွဲနှင့်သင်၎င်းပြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုဧရိယာ.
အဖျား 3: သငျသညျအဆိုပါ coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း Safely ရန်ခရီးသွားစေချင်လိုလျှင်သန့်ရှင်းသင်၏လက်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
များစွာသောလူမကျြနှာကိုမျက်နှာဖုံးများမှတဆင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ရှင်းလင်းသောခုတ်မောင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်နေစဉ်, အဖြစ်မှန်အတွက်, ဆရာဝန်များကသူတို့အားကျန်းမာသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဘာမျှအနည်းငယ်သာလုပ်ပေးတွေ့ပြီ. အစား, လက်အဝတ်လျှော်မကြာခဏအတွက်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တှေ့ရှိရ၏ ကျန်းမာတည်းခို. သင်မကြာခဏသင်၏လက်ကိုဆေးကြောနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘယ်မှာတစ်နေရာခရီးသွားနေပါလျှင်, အစားလက်သန့်ရှင်းရေးဆောင်ကြဉ်းနှင့်မကြာခဏအသုံးပြုရန်.
ဒီတူညီတဲ့သွေးကြောထဲမှာ, သင်၏မျက်နှာကိုပယ်သင့်လက်ကိုစောင့်ရှောက်, နှင့်ဝေးသင့်ရဲ့ပါးစပ်နှင့်မျက်လုံးများကနေ. These are the higher risk areas for you to get an infection.
အဖျား 4: ခရီးသွားအာမခံကိုရယူလိုက်ပါ
သငျသညျအနေဖြင့်အမေရိကန်အခြေစိုက် အကယ်., အကြွေးဝယ်ကတ်များကိုများများ built-in ပူဇော် ခရီးသွားအာမခံ, သငျသညျသစ်ကို coronavirus ဖြစ်ပွားဖုံးလွှမ်းလျှင်ကြည့်ရှုရန်သင့်ကတ်ထုတ်ပေးသူနှင့်အတူစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သော်လည်း. လူတိုင်းအခြားသူများအတွက်, သို့သော်, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏အတည်ပြုခဲ့သည်အမှုပေါင်းတက်လျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်ခရီးသွားသင့်ရဲ့နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ကိုစတင်လျှင်သင်ဝယ်ယူခရီးသွားအာမခံဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
ဤသည်အစွန်အဖျားလည်းအမ်းခရီးသွားမှသက်တမ်းတိုး, ထိုကဲ့သို့သောရထားလက်မှတ်တွေအဖြစ်, ဟိုတယ်များ, နှင့်ခရီးစဉ်. အဲဒါကိုစာအုပ်ပိုပြီးရှေ့ပြေးကုန်ကျစခွေငျးငှါနေစဉ်, အမ်းခရီးသွားအစီအစဉ်များရှိခြင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖျက်သိမ်းခြင်း၏အမှု၌ကြီးမားသောချွတ်ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်.
အဖျား 5: လူအုပ်ထဲကနေအဝေးနေဖို့!
ကနျြးမာရေးကျွမ်းကျင်သူများဗိုင်းရပ်စ်အသိုင်းအဝိုင်းအဆက်အသွယ်များမှတဆင့်ပြန့်နှံ့သတိပေးပါပြီ, အရာကိုသင်တတ်နိုင်သမျှလူစည်ကားသောအရပ်တို့ကိုမပယ်နေဖို့သင့်တယ်ဆိုလိုတယ်. ဤသည်နေမကောင်းလူတွေကိုသင့်ရဲ့ထိတွေ့မှု minimize လုပ်. ဒါပေါ့, ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု လူအစုအဝေးကိုဆွဲဆောင်လေ့မရှိဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲနိုင်ဖြစ်သင့် Off-အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်းမှာအလည်အပတ်ခရီး ဧည့်သည်အနိမ့်ကြသောအခါ. ထိုကဲ့သို့သောပဲရစ်အဖြစ်သောနေရာများအတွက်, ဒီပြတိုက်ဖွင့်လှစ်မှာသို့မဟုတ်ရုံမတိုင်မီအနီးကပ်အစားနေ့ကိုရသောအခါခရီးသွားဧည့်အသွားအလာထိပ်အလယ်၏ Louvre သွားရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်သည်.
ဒါပေါ့, ဒါဟာလုံးဝလူအစုအဝေးကိုရှောင်ရှားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်သည်, အထူးသဖြင့်အတွင်း ပွဲတော်များ. ဥရောပအများကြီးလူကြီးမင်းတွေဖြစ်တဲ့အီတလီရဲ့ Carnivale အဖြစ်ပွဲတော်များဖျက်သိမ်းနှင့်စပိန်အတွက်ပင် Mobile World Congress တွင်ကုန်စည်ပြပွဲထားပါတယ်နေစဉ်.
အဖျား 6: ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ
ခရီးသွား hectic ဖြစ်ပါသည်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသော. သို့သျောလညျး, ခရီးသွားများ၏မြန်နှုန်းမြင့်သွားလာရင်းသဘောသဘာဝကိုသင်စုတ်ပြဲကိုယ့်ကိုယ်ကို run ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဆိုလိုပါ. ဒါဟာအရုဏ်၏အက်ကွဲမှာနိုးထဖို့ဆွဲဆောင်အသံနှင့်အတိတ်သန်းခေါင်တိုင်အောင်ထွက်ဦးမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သေချာသင်တို့ရှိသမျှသည်ပျော်စရာနေရခြင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်စေရန်အရေးကြီးပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်? လုံလောက်သောအိပ်စက်မှုနှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာကိုဆိုလိုတာသောကြောင့်သင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနာမကျန်းဆန့်ကျင်သူ့ဟာသူခုခံကာကွယ်နိုင်ပါတယ်. ဤသည်ရောဂါများပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်နေသောသူတို့အဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောသက်ကြီးရွယ်အိုများသို့မဟုတ် comprised ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ရှိသူများအဖြစ်.
အဆိုပါ coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း Safely ခရီးသွား – Bottom Line
ဤအချိန်ကာလအတွင်းခရီးသွားဘွတ်ကင်ကြသောသူတို့အဘို့စိုးရိမ်ဆက်ဆက်ရှိစဉ်အခါ, သင် coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာရန်အဘို့အနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. အဆိုပါ COVID-19 ရောဂါကူးစက်တတ်သော, ဒါပေမယ့်နိုင်ငံအများအပြားသေးထိခိုက်ခြင်းနှင့်နေဆဲခရီးသွားဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာကြသည်မဟုတ်. သင်နှင့်အတူဆက်လက်အပေါ်အစီအစဉ်ရှိပါက သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်, ကျန်းမာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဤအကြံပြုချက်များကိုသုံးပါ. Make သေချာသင်အလုံအလောက်အိပ်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာအစာစား, အားလုံးသင့်ရဲ့လိုအပ်ကာကွယ်ဆေးရ, ပိုးသတ်ဆေးနှင့်အတူသငျသညျပတျဝနျးကငျြရှိဒေသများတွင်သန့်ရှင်းရေး, နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သင့်ရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုစောင့်ရှောက်. ယ်ယူရန်ခရီးသွားအာမခံနှင့်ရှောင်ပါတတ်နိုင်သမျှဒေသများစည်ကား, လူအပေါင်းတို့သည်အထက်သတိထားစောင့်ရှောက်. သင်၏နိုင်ငံအတွင်းပေါ်လာအမှန်တကယ် coronavirus ဖြစ်ပွါးခြင်း၏အမှု၌ပွငျဆငျကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ.
အဆိုပါ coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးကရထားကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် – ရထားနှင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နယ်လှည့်များ၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်လုံခြုံမှုကိုခံစား တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “မည်သို့ရန်ခရီးသွားလုံခြုံစွာ coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း?” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/travel-safely-coronavirus/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)